Publié juillet 23, 2018 par Book News
Mitohy hatrany ny fanentanana ataon’ny Ecpat France amin’ireo tovolahy ao Andoharanofotsy.
Fanentanana nataon’ny Ecpat France
Nanentana momban’ny « genre et stéréotype » na ny maha lahy na maha vavy sy ny hevi-draikitra ho an’ireo tanora lehilahy miisa 20 ao Andoharanofotsy ny Ecpat France nandritra ity volana Jolay ity.
Misy ny maha samihafa ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin’ny ara-batana. Izany fahasamihafana izany dia hamafisin’ny fiarahamonina eo amin’ny tontolo an-davananandro. Hita taratra izany eo amin’ny sehatry ny asa, sehatra ara-toekarena ary eo amin’ny fifandraisana ara-piarahamonina.
Noho ny hery ara-batana tsy mitovy dia iharan’ny herisetra ataon’ny lehilahy matetika ny vehivavy. Ity farany ihany anefa no mahazo tsiny eo amin’ny fiarahamonina noho izy manao fitafy manintona ny lehilahy. Raha atao anefa ny fandinihina dia hita fa tsy mahafehy ny tenany ny lehilahy.
Manoloana izany dia natao izao fanentanana ny tanora lehilahy izao mba hampianarina azy ireo. Tanjona ny hampiova ny lehilahy aorian’izao fanentanana izao. Antenainana ny hitovian’ny fahalalan’ny lehilahy ka hampiova ny fihetsiny ho lasa fakantahaka eo anivon’ny mpiara-belona.
Ireo tanora mpanentana eo anivon’ny Ecpat France.
« Modules” nampahafantarina ireo tanora
Mizara dimy ireo « modules » na taranja nampianarina azy ireo tao anatin’ity lohahevitra » Ny maha lahy na vavy sy ny hevi-draikitra » ity. Nampianarina azy ireo voalohany ny « sexe et genre et notion de stéréotype » na ny maha lahy na maha vavy sy ny mampiavaka ny lahy sy ny vavy ary ny momban’ny hevi-draikitra.
Nojerena tamin’io ny mampiavaka ny maha lahy na maha vavy sy ny maha samihafa ny lahy sy ny vavy. Nohalalinina ihany koa ny anjara asan’ny mampiavaka ny lahy sy ny vavy na ny « genre ». Nampahafantarina ny hevi-draikitra amin’ny anjara asan’ny mampiavaka ny lahy sy ny na ny « genre ».
Noezahina nampitaina tamin’izany fa ny maha lahy na ny maha vavy dia hita amin’ny toe-batana. Ny fahasamihafana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy na ny « genre » kosa dia fomba fijery ara-piarahamonina izay miankina amin’ny fifandraisana eo amin’ny samy olona. Mivoatra anefa izany fomba fijery momban’ny fahasamihafana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy na ny « genre » izany.
Ny faharoa kosa dia ny « perceptions et attentes des hommes et des femmes et fondement culturel des stéréotypes » na ny fomba fandraisana ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny fototra ara-kolontsaina eo amin’ny hevi-draikitra.
Jerena ao amin’izany ny finoana sy ny fomba fijery momban’ny lehilahy sy ny vehivavy. Fantarina hoe manao ahoana ny angano, ny tantara, ny ohabolana ary ny rafi-piarahamonina mametraka na manamafy ireo hevi-draikitra mahakasika ny maha samihafa ny lehilahy sy ny vehivavy. Jerena ny paik’ady hiadina hevi-draikitra manome lanja ny fahasamiafana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy.
Hafatra nampitaina tamin’ity taranja ity ny tsy fiovana eo amin’ny anjara asan’ny maha lahy na maha vavy sy ny andraikitry anjara asan’ny fahasamihafana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny fahatelo kosa dia mahakasika ny hevi-draikitra sy ny anjara asan’ny fahasamihafana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy. Fantarina amin’izany fa ny endrika asehon’ny fiarahamonina amin’ny lehilahy sy ny vehivavy amin’ny fotoana voafaritra dia vokatrin’ny fiarahamonina. Mety miovaova araka ny toe-javatra misy.
Ny anjara asan’ny lehilahy sy ny vehivavy dia voafaritry ny endrika asehon’ny fiarahamonina. Io no hevitra azo tsoahina amin’ny lesona fahatelo.
Ny fahefatra kosa dia ny « Être un homme- être une femme » na ny maha lehilahy sy ny maha vehivavy. Lalinina amin’izany ny famefen’ny fiarahamonina ny toe-tsain’ny lehilahy sy ny vehivavy. Hafatra hampitaina amin’izany ny fahafan’ny lehilahy sy ny vehivavy mifanampy.
Ary ny fahadimy farany dia mahakasika ireo voambolana mifandray amin’ny maha samihafa ny vehivavy sy ny lehilahy na ny « genre ». Nohazavaina tamin’izany ireo hevitry ny voambolana mifandray amin’ny maha samihafa ny lehilahy sy ny vehivavy na ny « genre. »
« Ny fiarahamonina dia manome tombony manokana ny lehilahy. Heverina ho manan-danja kokoa ny lehilahy nohon’ny vehivavy. Ny vehivavy dia fanaka malemy, azo hanaovana izay tiana atao. Ny lehilahy kosa dia sokajiana ho ambony, manana ny maha izy azy mihoatra ny vehivavy. Tsapa izany fa lasa fomba fijery raikitra na hevi-draikitra », hoy i Hobiharinosy Andomanitra Mahery.
Ny lanjan’ny fanentanana
« Zava-dehibe ny fanentanana toy izao sy ny torolalana amin’ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny. Efa misy amin’izao ny lalana mametraka ny fitoviana’ny zo eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy. Mitovy ny filaharan’ny rehetra. Tsy misy ambany sy tsy misy ambony fa mitovy ny andraikitry ny lehilahy sy ny vehivavy », hoy i Hobiharinosy Andomanitra Mahery. « Misy fiantraikany amin’ny tanora lehilahy entaninay izao hetsika izao. Ezahina atao ny ahatafita ny hafatra amin’ireo olona hafa. Andrasana araka izany ny fandraisan’ny tsirairay andraikitra eo anivon’ny fiarahamonina ».
» Nahafantaranay ny mampiavaka ny lahy sy ny vavy ary ireo hevi-draikitra eo amin’ny fiarahamonina izao fanentanana izao. Hita izany fahasamihafana izany eo amin’ny endrika ivelany toa ny volo sy ny feo. Na dia eo aza ny fahasamihafana eo amin’ny roa tonta izay, dia tsy midika ho ambony ny lehilahy. »
Mahasoa tokoa izao fampianarana izao satria nahafantaranay ny tokony ho atao sy mampiova ny toe-tsaina eo anivon’ny mpiara-belona. Tokony asiana hetsika toa izao ny eny anivon’ny Fokontany mba ahafantaran’ny olona ny tokony ataony sy hampiova ny toe-tsainy manoloana ny herisetra misy toa ny famonoam-bady.
« Ilaina ihany koa ny fanentanana tahaka izao mba ahafantaran’ny olona ny fepetra tokony ho raisina toa ny fitoriana amin’ny manam-pahefana akaiky indrindra raha sendra mahita trangana herisetra. Vonona aho hampihatra ny fahalalana azo raha sendra mahita trangana herisetra « , hoy Kevin, 21 taona, mpianatra, mipetraka ao Andoharanofotsy. « Nahazo fahalalana momban’ny famantarana ny lehilahy sy ny vehivavy izahay. Amin’ny alalan’ny endrika ivelany hitan’ny maso no ahafantarana izany toa ny vavy mitsiry nono, lava volo, ary ny lehilahy vaky feo mandritra ny fiovan’ny toe-batana amin’ny adolatsento. »
Ny « stéréotype » kosa dia endrika anaty. Ohatra, ny lehilahy somary mahery setra, mafy fo fa ny vehivavy malefaka. Ny fanentanana toa izao dia misarika ny sarin’ny tanora tsy hanao herisetra amin’ny vehivavy. Tsara tokoa ny hetsika toa izao satria mamolavola ny toe-tsain’ny lehilahy tsy hanao herisetra amin’ny vehivavy. Nahafa-po ilay fanentanana sady nitondra vokatsoa.
« Na dia eo aza ny fahasarotana amin’ny fampiharana azy, dia ezahina atao ny misarika ny sain’ny olona mba hanana toe-tsaina hiady amin’ny herisetra mpahazo ny vehivavy », Jean Christophe, 26 taona, mipetraka ao Andoharanofotsy.
Maro karazana ny maha samihafa ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy mijanona amin’ny endrika ivelany ihany fahasamihafana izany fa mitomban-dahy avokoa ny rehetra. Ny lehilahy afaka manao ny asan’ny vehivavy, ny vehivavy afaka manao ny asan’ny lehilahy. Miady hitovy zo amin’ny lehilahy ny vehivavy nohon’ny fahasarotan’ny fiainana amin’izao. Ny vehivavy anefa tsy afaka mampiasa hery ara-batana toa ny asa eny anivon’ny Tafika.
« Tsara ny fandraisanay ny fanentanana. Mety aminay ny fampianarana koa hampitanay amin’ny ho an’ny mpiara-monina manodidina sy ny Firenena Malagasy », hoy Bienvenu, 26 taona.
Publié dans Actualités, Brand journalism et Social